गायिका एलिना चौहानको ‘तिम्रो खुशीमा’को भिडियोमा ऋचा र सुदिप – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७६, २७ श्रावण सोमबार १७:४६
गायिका एलिना चौहानको ‘तिम्रो खुशीमा’को भिडियोमा ऋचा र सुदिप
एजेन्सी, काठमाडौं। केही चर्चित गीतहरुको कभर गाएर भाइरल बनेकी गायिका एलिना चौहानको नयाँ गीत ‘तिम्रो खुशीमा’ म्युजिक भिडियो सहित रिलिज गरिएको छ। इन्स्टाको फोटो र तिम्रो मायाले बाँधेर राख जस्तो गीतहरुको कभर पछि एकएक एलिनाको चर्चा चुलिएको थियो। ‘तिम्रो खुशीमा’ एलिनाको आफ्नै भने पहिलो म्युजिक भिडियो हो।
PREVIOUS Previous post: आफ्नी आमा उत्कृष्ट भन्दैमा अरुको आमालाई बोक्सी भन्न पाईन्छ ? भन्दै गर्जिए रमेस प्रसाईँ !
NEXT Next post: खेल्कुद : सन्दिपपछि सोमपालले अन्तर्राष्ट्रिय फ्रेन्चाइजमा चर्चा कमाउँदै